Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa nyaya yakazara yeBhola Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita "Muparadzi". Our Miralem Pjanic Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvezvakarurama, bending kusununguka kusununguka, pamwe nekubudiswa kwake kubva kune vakafa-bundu mamiriro asi asi vashomanana vanoona Bio yaM Miralem Pjanić iyo inofadza zvikuru. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Miralem Pjanić akaberekwa musi we2nd musi waApril 1990 kuTuzla, SFR Yugoslavia yava kuzivikanwa zvino saBosnia neHerzegovina. Akaberekerwa nababa vake, Fahrudin Pjanić (wechitatu muchengeti wemutambo uyo akashanda rimwe Job) uye kuna amai vake, Fatima Pjanić (amai veimba panguva yekuzvarwa kwaM Miralem).
Mwedzi miviri mushure meMiralem akaberekwa, mhuri yake yakatamira kuLuxembourg iri kutsvaga mafuro akaoma, kufamba kwakazopedzisira kwave sarudzo huru yakachengetedza hupenyu hwemhuri sekuzvarwa kwake mwedzi mushure mokubva kwavo, yakabatwa muhondo yakaona kurasikirwa noupenyu uye kuparadzwa kwezvinhu.
Vakagara panzvimbo yavo itsva yekugara muLuxembourg, Fahrudin Pjanić akaramba achiita mutambo uye akatora chikamu cheJobho semushandi wekufekitari. Akaitawo wechidiki Miralem kuenda naye kudzidzisa kuitira kuti amuzive nebhola, achitenda kuti mwanakomana wake aigona kubudirira zvikuru mumutambo.
Kutenda kwaFahrudin kwakanga kusina kubatwa nekutenda kusina maturo asi chiitiko chaakaona pane imwe yenhambo dzavo dzekuzorora kubva kuLuxembourg kusvika kuBosnia. Makore gare gare Fahrudi aiyeuka kuti:
Young Miralem haazopotsa mukana wekutamba bhora, kunyanya panguva yezororo rekufamba kubva kuLuxembourg kusvika kuBosnia apo ane zvishoma zvokufunganya nezvekuchikoro. Anowanzopedza maawa akawanda achitamba uye ari kutamba bhora.
Achitaurazve, akagovera zvaaizorarama kuti ayeuke sekutsvaga kunoshamisa kune zvikomo zvekuda kwaMiralem kwebhola
Ikoko kwakanga kune rwendo urwu rwandakazosvika manheru usiku uye ini ndakatarisira kuti arara nehope kuti atange kushamiswa nemanzwiro ekumhanya kubva garaji. Takasungwa nababa vangu takaenda kugaraji raitarisira kuongorora mabhiriji. Asi isu takashamisika takaona kuti Mirlem aidzidzira.
Hazvina nguva refu Miralem (ane makore anopfuura 7) akanyoresa muboka rekutanga rekuSweden, FC Schifflange 95 apo akazviratidza semunhu wekugadzira tarenda uye kushanda zvakaoma, combo yakakwana haigoni kuratidzirwa nebhokisi kutanga-ups.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Career Buildup
Yakanga iri pa FC Schifflange kuti Miralem akaisa maitiro anoyevedza akazocherechedza vanhu vanobva kuBelgian, Dutch uye German makilabhu. Kutungamirirwa nababa vake nekurudziro kubva kune imwe nyika yekare yeLuxembourg, Guy Hellers. Miralem yakagadzirirwa chikwata cheFrance, FC Metz.
Miralem, uyo akanga ari mumakore ekuyaruka kwechidiki paC FC Metz akafunga kuti chikwata chaive chekudzikisa pad mukurumbira. Somugumisiro, akashanda kuti amire mumakwikwi mapoka evechidiki kusvika awana kuchengetedza kumutsara wekutanga wechikwata uye akaita chikwata chake paaiva nemakore manomwe.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Asati azvisimbisa pa FC Metz boka rekutanga Miralem akatamira kuLyon apo akawana chinangwa chekambani yakaona Real Madrid Yakadzingwa kunze kwe2009 / 2010 Champions League kuBernabeu.
Akabatsirawo rutivi rwake kusvika kumashure ekupedzisira emusangano umwechete. Pashure paizvozvo akatamira kuRoma mu2011 apo akazvisimbisa semudziri wakasiyana-siyana muSerie A. Asitali Asati asvika Juventus Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Miralem Pjanic ave ane musikana wake kwenguva refu, Josepha weNix, France. Ukama hwavo hwakabereka mwanakomana, Edin uyo akaberekerwa mu2014.
Pane imwe nguva mu2013, paiva nenhema dzekubva kuna Josefa kune mutori wenhau, sexy, Gisigia Rossi uyo akatanga kutambidzana muMilan. Zvisinei, mhepfenyuro yakanga isingagamuchiri pamasimba akanaka sezvo Miralem akamutsa zvakare uye kure neukama naJosepha.
Sezvakaitika panguva iyi, zvishoma zvinozivikanwa nezvehukama hwaMiralem neFrancesca yake itsva.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Chitendero uye Dzidzo
Apo zvinouya pakunamata, Miralem Pyanich anotaura seMuslim. Maitiro ake echitendero anogamuchirwa nevatendi varo veItaly avo pasinei zvikuru neveKaturike vanozivikanwe nekuda kwekunamata kwavo.
Zvakakodzera kutaurwa ndezvokuti Miralem akaita shingairo yekuzvidzivirira pachake kuburikidza nekudzidza mitambo uye dzidzo yepanyama paYunivhesiti yeSarajevo. Nzira isinganyanyi kutamburwa nemapurisa ebasa.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Personality Facts
Miralem Pjanić yakatsanangurwa nevakawanda sekushanda zvakaoma chiito icho chiri chekutanga chebasa rake kubudirira.
Pamusoro pomuviri, ane urefu hwe 1.78m, maziso e hazel uye ave achionekwa nguva dzose aine ndebvu dzinobva kubva pamashanga kusvika pakuzara.
Kuti uone zvose, Bosnian is polyglot inotaura mitauro mitanhatu: English, Italian, German, French uye Luxembourgish, asi zvinoshamisa kuti haitauri mutauro wake wekuBosnia.
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Chikonzero Chikonzero Chokutamba Nickname
Pjanic nekuda kwekugadzira kwake uye kutonga nebhora rainzi "The Painter". Midfielder ane ruzivo mukugadzira vatsigiri avo vakaona iye akava mubatsiri wepamusoro muSerie A kwemaviri maviri akapfuura.
Ichokwadi, iyo yaimbova nyanzvi yeBrazil Juninho yakamutsanangurira, mu2015, semukuru wekutsvaga kusununguka munyika.
"2Mire ine unhu hwakanaka. Iye angangodaro akaisvonaka akasununguka-kukamba chigamba munyika mazuva ano. Kwete ini ndine chokwadi pamusoro pazvo - iye ndiye akanakisisa ".
Miralem Pjanic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Socia Media Activity
Miralem Pjanić ane hutano hwakanaka hwehupenyu hwehupenyu sezvinoratidzwa nemitambo yakasununguka pamagariro ake evanhu. Kutanga ne Twitter, nyeredzi yebhola ine muteveri we371 ane tweets yake zvikuru inoshandiswa basa.
Same inogona kutaurwa nezvake Facebook peji paanova nevateveri vemairiyoni imwe chete uyewo Instagram kwaanova nevanopfuura vamiririri vane mamiriyoni e2.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nokuverenga Miralem Pjanić Childhood Indaba pamwe neSepold Biography Facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyora iwe kana kutaura nesu!
Francesco Totti Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Sami Khedira Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Bojan Krkic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Svondo Oliseh Childhood Story Plus Untold Biography Facts